Ngathi | XTL
Ukuba ujonge ukwenza uhlobo lwakho kwiinkonzo ze-fabrication, ke wena ufumene umthengisi olungileyo. I-Linying xing tai ekhethekileyo ye-ceramic c., I-LTD ngomnye womenzi ophambili weenkonzo ze-china. Ukusekwa ngonyaka ka-2009, iziseko zethu ze-Afisi ze-Actones zingumqolo wensimo yethu encedisa ukuhlalutya ukuhlalutya kwemveliso. Sifake oomatshini abakhethiweyo kuzo zonke iiyunithi zethu ezisincedayo ekugcineni inqanaba eliphezulu lemveliso. Sineqela leengcali, ezinamava kule ndawo. Ulwazi lwabo lwasikhokelela ukuba siphawule igama elilungileyo kule ntengiso inokhuphiswano. Ukusebenza phantsi kwenkcazo ebekwe nguMzi-mveliso kuyile indlela esinokuthi sifikelele kwi-punnen yempumelelo.